သံစောင်းထက် ရေစောင်း ထက်သတဲ့
မုန်တိုင်း သက်တာ မကြုံဖူးတော့
လေစောင်းထက် မျက်စောင်းထက် သတဲ့။
တသက်မှာ တခါ စ, မြင်ဖူးတော့
(ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက် မျက်စောင်း တစ်ချက် ပိုင်ရှင်သို့ ရည်ညွှန်းပါသည်။)
Posted by Myint Ko at 6:18 PM No comments:
သမိုင်းပညာရှင် နီးလ်ဖာဂူဆန် (Niall Ferguson) ရဲ့ စာအုပ်အသစ် Civilization အလိုအရ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အနောက်ကမ္ဘာက အရှေ့ကမ္ဘာထက် သာသွားရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက အင်စတီကျူးရှင်းတွေကြောင့်လို့ အတိအလင်းဖော်ပြရင်း အကြောင်းရင်း (၆) ချက်ကို ဆွဲထုတ်ပြပါတယ်။
၁။ အပြိုင်အဆိုင်ဓလေ့ - ဥရောပရဲ့ ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်အခြေအနေကြောင့် ဥရောပသားတွေကြားမှာ တနယ်တကျေးမှာ အခွင့်အလမ်းတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပင်လယ်ရပ်ခြား ကုန်သွယ်ရေးကို အကြောင်းပြုလို့ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တယ်။ (အဲဒီအချိန်မှာ နဂိုက တိုးတက်နေတဲ့ အရှေ့တရုတ်ပြည်ဟာ တခါးပိတ်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရပ်တန့်နေခဲ့တယ်)။
၂။ သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာမှု - ၁၆ နဲ့ ၁၇ ရာစုတွေမှာ ဥရောပမှာ သိပ္ပံပညာတိုးတက် ကျယ်ပြန့်လာသလောက် သတင်းအချက်တွေလည်း လွတ်လပ်စွာ ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်။ သိပ္ပံပညာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် တခြားကဏ္ဍတွေမှာ တိုးတက်လာသလိုပဲ လက်နက်တွေမှာလည်း ခေတ်မှီလာခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒီအချိန်မှာ အရှေ့က ဖွံ့ဖြိုးပြီးသား မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့ရင်း ခေတ်နောက်ကျခဲ့တယ်)။
၃။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားမှု - တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီက အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ် အင်ပါယာဟာ တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ အာဏာပိုင်စနစ်နဲ့ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အားပေးတဲ့ စပိန်အင်ပါယာထက် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
၄။ ဆေးသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှု - ၁၉ နဲ့ ၂၀ ရာစုမှာ ဆေးပညာ အလွန်အမင်း တိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေက အင်ပါယာ ထူထောင်ရေးအတွက် အဓိက အားကိုးအားထားစရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၅။ ဈေးကွက်ဝါဒနှင့် စားသုံးသူဝါဒ ထွန်းကားလာမှု - ၁၈နဲ့ ၁၉ ရာစု အင်္ဂလန်မှာ စက်မှုတော်လှန်ရေးက ဈေးကွက်ဝါဒနဲ့ စားသုံးသူဝါဒဟာ တားဆီးမရတော့ဘဲ ကမ္ဘာတလွှား ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။
၆။ အလုပ်ကြိုးစားမှု - ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားမှာ ဂိုဏ်းကွဲတခုဖြစ်တဲ့ ပိုရိုတက်စတင့်ဝါဒ ဟာ အလုပ်ကြိုးစားမှုကို အားပေးပါတယ်။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက တရုတ်ပြည် တိုးတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ပရိုတက်စတင့် အယူဝါဒ ပျံ့နှံ့မှုကလည်း အကြောင်းတရားတခုအဖြစ် ဆိုထားတာပါ။
တကယ်တမ်း ၁၅ ရာစုမှာ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းဟာ ဥရောပထက် ယဉ်ကျေးမှုအရ ရှေ့တန်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြို့ပြဟာ အာရှက တရုတ်ပြည်မှာရှိခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက အကြီးဆုံး မြို့ ၁၀ မြို့ကို လက်ချိုးရေကြည့်လိုက်ရင် ဥရောပမှာ ပြင်သစ်ရဲ့ ပါရီမြို့က လွဲလို့ ကျန်မြို့တွေ အားလုံးဟာ အာရှကချည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြို့ပြ ၁၀ ခုကို ပြန်ရေတွက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ အာရှက (ဂျပန်က) တိုကျို မြို့တမြို့ပဲ စာရင်းမှာပါပြီး ကျန်အားလုံးဟာ အနောက်က မြို့ပြတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်သွားအောင် အထက်က ၆ ချက်က အခြေအနေတွေ ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်က အဲဒီအချိန်က အာရှက တခုတည်းသော အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုးတက်နေရတဲ့ အကြောင်းက အနောက်ရဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းမော်ဒယ်တွေကို အဲဒီကတည်းက ပုံတူကူးချခဲ့တာကြောင့်လို ဆိုတာပါ။ သူ့စကားအတိုင်းဆိုရရင် ဂျပန်ဟာ အနောက်တိုင်းရဲ့ Application တွေကို Download ဆွဲချခဲ့တယ်။
အခုလက်ရှိ အာရှမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းဟာလည်း အနောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး မော်ဒယ်တွေ (အင်စတီကျူးရှင်းတွေကို) အနည်းနဲ့ အများ ပုံတူကူးရင်း ရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တချက်ထောက်ပြတာက ဘယ်လို ယဉ်ကျေးမှုမှာမဆို အင်စတီကျူးရှင်း ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ၂၀ ရာစုမှာပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အင်စတီကျူးရှင်းတွေနဲ့ လက်တွေ့စခန်းသွားခဲ့တဲ့ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား၊ အရှေ့နဲ့အနောက် ဂျာမနီ၊ တရုတ်ပြည်မှာ ပြည်မနဲ့ အပြင်ဘက်မှာ အခြေအနေတွေကို ဥပမာ ပေးထားပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအရ အနည်းနဲ့ အများတူတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ တခြမ်းကို ကွန်မြူနစ်စနစ် ချပေးပြီး၊ နောက်တခြမ်းကို အရင်းရှင် စနစ်ချပေးလိုက်ရင် မတူတဲ့ ရလဒ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကို ထောက်ပြထားပါတယ်။
Civilizationဟာ အနောက်တိုင်းသားသမိုင်းဆရာ တယောက်က အနောက်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ အတိတ် သမိုင်းကို ပြန်တူးဆွပြီး အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ ကျဆုံးခန်းအပေါ် စိုးရိမ်သောကနဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို လှုပ်နှိုးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ စာအုပ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေ သမိုင်းကို လေးလေးနက်နက် သင်ဖို့ အရေးတကြီး တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀၀ လုံးလုံး အနောက်ဟာ အထက်က အားကောင်းချက်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးခဲ့သလို၊ အခုအချိန်မှာ အဲဒီ အားကောင်းချက်တချို့က အရှေ့ခြမ်းက ပုံတူ ကူးချပြီး ထပ်ကျပ်မခွာ နောက်က လိုက်လာကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အနောက်ကတော့ ဒါတွေကို တန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
အဲဒီကနေ အမြဲတမ်း ခေတ်နောက်ကျတတ်တဲ့ အရှေ့တိုင်းက မြန်မာပြည်အတွက် တွေးစရာတချို့ ရလာပါတယ်။ နီးလ်ဖာဂူဆန်ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်း (၆) ချက်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အပေါ် တင်ကြည့်ပါတယ်။
ဥရောပမှာ ၁၆ ရာစုကနေ ၁၉ ရာစုအထိ အချိန်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ အလောင်းမင်းတရားရဲ့ တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော် ခေတ်တို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတော်တွေဟာ သူ့ခေတ်နဲ့ သူအလျှောက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အင်ပါယာတွေ (ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားအထိလို့ အဆိုရှိပါတယ်) လက်နက်လက်နိုင်ငံတော်တွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (နံပါတ် ၂)
ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန် ထောက်ပြတဲ့ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး တခြား Application တွေဖြစ်တဲ့ အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဓာတ်၊ သို့မဟုတ် အန်တြာပရာနော် စိတ်ဓာတ် (သို့) စွန့်ဦးတီထွင်စိတ်ဓာတ်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံပညာ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အင်စတီကျူးရှင်းတွေတော့ ထွန်းကားခဲ့ပုံ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် (၆) နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ မြန်မာပြည်မှာ အများစု ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အလုပ်ကြိုးစားတာကို အားပေးတာထက် ရသမျှနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲဖို့ ဆုံးမတဲ့ ဘာသာတရားဖြစ်ဖို့ များပါတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းကနေ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘယ်လို Application မျိုးကို Download ယူလို့ ရမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ အတော်လေး အားငယ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာဘုရင်တွေရဲ့ နိုင်ငံတော်တွေ Civilization ထဲကနေ အားကိုး အားထားပြုလောက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးမော်ဒယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ရှိတယ်ဆိုရင် အကိုးအကားနဲ့ ထောက်ပြရင် အနာဂတ် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် အကျိုးရှိမှာပါပဲ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မရှိကို အရှိလုပ်ပြီး၊ (နေပြည်တော်က ရုပ်ထုလိုမျိုးတွေထုပြီး) ကြံဖန်ဂုဏ်ယူ၊ ကိုလိုနီစနစ်နယ်ချဲ့ကို လက်ငြိုးထိုး အပြစ်ဖို့ရုံလောက်နဲ့တော့ တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ရေးအတွက် အကျိုးမများ လှပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အပံ့တွေ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ က ဖော်ထုတ် ဟောကြားပေးဖို့ ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အားတက်စရာလိုပဲ ဆိုဆို၊ စိတ်မကောင်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောစရာ တချက်တော့ ရှိပါတယ်။ မကြာခင်တုန်းပဲ တရုတ်နိုင်ငံ ဆင်ဝှါတက္ကသိုလ်က သမိုင်း ပါမောက္ခ Qin Huiက မြန်မာပြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် အရှေ့တိုင်းထက် အနောက်တိုင်း အတွေးအခေါ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကနေ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အထိ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးခဲ့တာ၊ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ ၁၉၉၀ အတိတ်ကို လွမ်းစိတ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖော်ဆောင်မယ့် ပါတီကို တခဲနက် မဲပေးလိုက်တာတွေကို သူက ထောက်ပြပါတယ်။
ဒီအချက်အရဆိုရင် မြန်မာပြည်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးမော်ဒယ်ဟာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်ဆီကနေ အကန့်အသတ်နဲ့ ရထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် အဆက်ပြတ်ခဲ့တယ်ပဲ ဆိုဆို ခေတ်သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး Application တွေဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု (Civilization) နဲ့ အစိမ်းသက်သက်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
Civilization စာအုပ်ဟာ အနောက်တိုင်းသား သမိုင်းဆရာ နီးလ်ဖာဂူဆန် က အနောက်က လက်ရည်နိမ့်နေတဲ့ အချိန်ကိုက်ပြီး တချိန်က ဘယ်လိုနည်းတွေသုံးပြီး ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးခဲ့သလဲဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြရင်း သမိုင်းကို လေးလေးနက်နက် သင်ဖို့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို တိုက်တွန်းထားတဲ့ စာအုပ်ပါပဲ။
ဒီကနေ စဉ်းစားမိတာက ကျနော်တို့ ဆီမှာလည်း သမိုင်းလိမ်တွေမဟုတ်ဘဲ၊ သမိုင်းအမှန်အတိုင်း၊ အတိတ်ကနေ ဒီနေ့အထိ မြန်မာတွေ ဘာလို့ ကျဆုံး နေရသလဲဆိုတာကို သင်ခန်းစာယူနိုင်မယ့် သမိုင်းသင်ကြားရေးမျိုး လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါမှ အနာဂတ် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အကျိုးများမယ့် သမိုင်းသင်ကြားရေး ဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒီနေရာ က ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
Posted by Myint Ko at 10:41 AM 1 comment:
အရင်တစ်ပတ်က နည်းလမ်းတစ်ချို့ရေးခဲ့ပါတယ်။ post တစ်ခုတည်းအပြတ်ရေးဖို့ မအားတာက တစ်ကြောင်း၊ မိမိအပျင်းနည်းနည်းထူတာက တစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက်ဆိုင် မရောက်ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း ၊ ရောက်ပြန်တော့ connection မကောင်းတာက တစ်ကြောင်း၊... အကြောင်းတွေ များလွန်းလို့ ကျွန်တော်လည်း typical Myanmar တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ အရင်တစ်ခေါက်က ကျန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ပြပါ့မယ်။
Linguistic လို့ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံပညာကို ကိုးကားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာသာစကား တစ်ခုဟာ အသံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ၄င်းအသံတွေကို မှ အက္ခရာ (character) များနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အသံအစုအဖွဲ့တစ်ခုကို ဝေါဟာရ ဟု ရည်ညွှန်းကြ ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာသာစကားကို လေ့လာခြင်းဟာ အခြေခံအားဖြင့် အသံတွေကို မှတ်မိခြင်းနှင့် ပြန်လည် အသံထွက်ခြင်း၊ တစ်နည်းမဟုတ် ဝေါဟာရတွေကိုမှတ်မိခြင်းနှင့် ပြန်လည် သီကုံး ဖွဲ့နွဲ့ခြင်း ဟုဆိုချင်ပါတယ်။
အပိုင်း-၁ တွင် ဘာသာစကား ပြောရခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆက်သွယ်မှု ပြုရန် ဟု တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၄င်းသည် အခြေခံအချက်သာဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်ပါ။ ဘာသာစကား သုံးရခြင်းတွင် တခြားရည်ရွယ်ချက်များစွာလည်း ရှိပါသေးသည်။
ဥပမာ - မကြာသေးခင်ကမှ ရင်းနှီးသွားကြသော ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို “သူ့မှာ စိတ်ပူရမယ့်သူရှိလို့လား” ဟု မေးလိုက်ခြင်းသည် ဘာကို ဆိုလိုကြောင်း မြန်မာစကား ပြောတတ်သူတိုင်း သိကြမှာမလွဲပါ။ စကားပရိယာယ် ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိပြောချင်တာကို ထိထိမိမိရှိဖို့ စကားလုံးရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ရပါမည်။ ကိုယ်လိုရင်းကိုပြောနိုင်ဖို့ ဝေါဟာရကြွယ်ဝမှုရှိရပါမည်။ အောက်ပါဝါကျများမှာ အခြေခံဆိုလိုရင်း တူညီသော်လည်း ပြောသူ၏ခံစားချက် ကို ဖော်ပြနိုင်မှု ကွာခြားကြပါသည်။
ကိုယ့်မှာ ဝေါဟာရမကြွယ်ဝပါက ကိုယ်ပြောချင်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် ဝေါဟာရကြွယ်ဝနေစေရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် စုဆောင်းလေ့လာသင့်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာပြောချင်တဲ့ စကားလုံးရှာမရလျှင်ကော ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိပါသလဲ။
ဆိုကြပါဆို့။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာစကားပြောရာမှာ “ဆင်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သင်မသိလျှင်ကော၊ “အကောင်အကြီးကြီးဗျာ၊ နားရွက်ကြီးကြီး၊ နှာမောင်းရှည်ရှည်နဲ့၊ အစွယ်လည်းရှိတယ်၊ သစ်ဆွဲရာမှသုံးတယ်“ လို့ပြောလိုက်ရင် တစ်ဖက်သား နားမလည်နိုင်ဘူးလား။ ဒီတော့ သူက “ဆင်” လို့ခေါ်ကြောင်း ကိုယ့်ကို မပြောနိုင်ဘူးလား။ ဒီဥပမာက လွယ်လွန်းလို့ သတိမထားမိ ကြတာပါ။ ထို့အတူ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာ “elephant” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသိရင် ကောဒီနည်း လမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ “Er... what do you call that animal? ... It’s big and grey. It has big ears, long nose and long teeth, used for pulling trees.” သဒ္ဒါနည်းအရ မှန်ချင်မှ မှန်ပေမယ့် တစ်ဖက်နားထောင်သူက ကိုယ်ဘာကို ဆိုလိုလဲဆိုတာ တန်းကနဲ သိသွား မှာမလွဲပါဘူး။ လက်ဟန်ခြေဟန်ကလေးပါပါရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့် မယ်။
စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကိုယ်က စကားလုံးတစ်လုံးကိုမသိလို့ ရပ်လိုက်ရင် နားထောင်နေတဲ့သူက လည်းရပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ စဉ်းစားချိန်ရအောင် ဒီလိုလည်းလုပ်လို့ရပါသည်။ “ကျွန်တော် ဘာ ပြောနေပါလိမ့်” ‘What was I saying?”. နားထောင်နေသူက ကိုယ့်ထက် အင်္ဂလိပ်စာပိုတတ် သူဖြစ်နေပါက သူ့ရဲ့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
“How can I say this?” တစ်ဖက်လူက မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ပါက ဒီလို မေးနိုင်ပါတယ်။ “How do you say x x x in English?” တစ်ခါတစ်ရံ အင်္ဂလိပ်လို ရေးရာ၊ ပြောရာမှာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ဝါကျက မှန်မမှန် မသေချာဘူးဆို လျှင် နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းပြောတာ အကောင်းဆုံးပါ။
သင် ကိုဖီအာနန် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ၊ ဘန်ကီမွန်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ ကြားဖူး ပါသလား။ ကြားဖူးလျှင်တော့ ညံ့လိုက်တဲ့လူတွေကွာ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ မပီကလာ ပီကလာနဲ့ လို့ ကဲ့ရဲ့မိမှာအမှန်ပါပဲ။ တကယ်တော့ သူတို့တွေဟာ လူညံ့တွေမဟုတ်ရုံမက ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များထဲအပါအ၀င်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုလျှင် ဘာတွေလွဲနေလဲ။ လွဲနေတာက ကျွန်တော်တို့ ခံယူထားသည့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သဘောထားတစ်ချို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ရာတွင် တကယ့် အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်လူမျိုးတို့ပြောသောလေသံအတိုင်း လိုက်၍ပြောတတ်ချင်ကြပါသည်။ ထိုအတိုင်း လည်း လေ့ကျင့်ကြပါသည်။ သူတို့အတိုင်းပြောနိုင်လျှင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။ ဗမာစကား ပြောသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာရှိ အသံထွက်အများစုသည် တုပပြောဆိုရန်မခက်လှပါ။ ဒါပေမယ့် တူချင်သူများအတွက် တမင်တကာ မတူတူအောင် လုပ်ကြံပြောဆိုပါက နားထောင် သူများအဖို့ နားခါးလှသည်ကို ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မည်။ accent ဆိုတာကိုအလွယ်ဆုံး ဥပမာပြရရင် ကျွန်တော်တို့ ဗမာစကားကို ရခိုင်လူမျိုးကပြောတဲ့အခါ ရခိုင်သံဝဲ၀ဲနဲ့ပြောတယ်၊ ရှမ်းကလည်း ရှမ်းသံဝဲ၀ဲနဲ့ပြောတယ်၊ ကရင်ကလည်း ကရင်သံဝဲ၀ဲနဲ့ပြောတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွဲမြဲ နေတဲ့ လေယူလေသိမ်း ကို accent လို့ခေါ်လို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ pronunciation ကတော့ စာလုံး တစ်လုံးချင်းရဲ့ အသံထွက်မှန်ကန်မှု ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ accent ကလူမျိုး၊ ဇာတိ ဂုဏ်ကို ပြဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့လဲ ကိုဖီအာနန်တို့ ဘန်ကီမွန်းတို့ အာဖရိကန်လေသံ၊ ကိုရီးယားလေသံကို မစွန့်လွှတ်ပဲ မိမိလေယူလေသိမ်းအတိုင်းပြောကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ငါးပိသံက အာဖရိက ပြောင်းဖူးသံ၊ ကိုရီးယား ကင်မ်ချီ သံ ထက်တော့ အများကြီးသာပါတယ်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားက အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန် လေသံနဲ့ တူအောင် မပြောနိုင်ရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ အချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့ တော့။ ငါးပိသံနဲ့ပဲ ဂုဏ်ယူစွာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ရေရေ လည်လည် ပြောကြပါစို့။
အထက်မှာ လေယူလေသိမ်းအကြောင်းတင်ပြပြီးပါပြီ။ အသံထွက်ကတော့ ဘာသာစကား တစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသံထွက်မှားလျှင် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှု လွဲသွားတတ်လို့ပါ။ သာမာန်စကား ပြောကြရာမှာတော့ အသံထွက်မှားသွားလျှင် သိပ်ပြဿနာ မရှိနိုင်ပေမယ့် အမှားမခံတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါ ၀ါကျလေးနှစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
စာသင်သားအများစုကတော့ last time ကို “လတ်စ်တိုင်းမ်” လို့ ထွက်ကြတော့တာပဲ။ ဒီမှာတင် မျက်နှာပူစရာတွေဖြစ်တော့မှာပဲ။ အသံထွက်အမှန်က “လားစ်တိုင်းမ်” ဖြစ်ရမှာ။ အပြောခံရတဲ အင်္ဂလိပ်ကြီး ပြုံးစိစိနဲ့ အကြည့်ခံရတော့မယ်။ ပြောတဲ့သူက မိန်းကလေး၊ နားထောင်တဲ့ သူက ယောက်ျားလေးဆိုရင်. . .တွေးကြည့်ပေတော့။
အသံထွက်ဘာကြောင့်မှားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်တော့ အမှားကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြတာက တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကျောင်းနေကတည်းက အလွယ်တကူ ထွက်ခဲ့ကြတဲ့ အသံက ကြီးလာတဲ့အထိစွဲသွားပါတယ်။ အဘိဓာန်မှာ အသံထွက် သင်္ကေတတွေကို ဖတ်တတ်တဲ့အချိန်အထိ မိမိကိုယ်ကိုယ်မှန်နေတုန်းပါပဲ။ သူများအသံထွက်အမှန်ကိုကြားရ ရင်လည်း သူ့အသံထွက်က မှားနေတယ်လို့ စိတ်ကထင်တယ်။
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ၊ မခံချင်လို့ အဘိဓါန်လှန်ကြည့်မှ ကိုယ်မှားမှန်းသိတာ မနည်းပါဘူး။ အောက်ပါစကားလုံးများကို ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း အသံထွက်နေရင်တော့ အဘိဓါန် လှန်ကြည့်ပါတော့လို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ မြန်မာအများစုထွက်တတ်တဲ့အသံတွေပါပဲ။အင်္ဂလိပ် တွေနားလည်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာက ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
Posted by Myint Ko at 9:37 AM 1 comment:
Labels: English Study Notes
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းကိုမေးလိုက်။ ဘာလုပ်နေလဲ “အင်္ဂလိပ် စပီကင် တက်နေတယ်” ဟူသည့်အဖြေကို ညံညံစီစီ ကြားနေရသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၏အရေးကြီးပုံကို လူတိုင်း သဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကလို ကျွန်လုပ်ချင်သည့်သူများအတွက် စာနှင့် စကားဟု ယိုးစွပ်သည့်ခေတ်မဟုတ်တော့ပြီ။
သူသူငှာငှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ချင် ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ဒွတ်ဒက်ရွှတ်ရှက် နှင့်ပြောနေ သူတစ်ယောက်ကို မြင်ရကြားရတိုင်း သူတို့လို ပြောတတ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာ တတ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟိုသင်တန်း ဒီသင် တန်းတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး တက်ကြ ပြန်သည်။ သင်တန်းတွေကလည်း သင်ပေးကြပါသည်။
ဒါပေမယ့် တကယ့်တစ်ကယ် မြို့ထဲမှာ တိုးရစ်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အိမ်သာ ဘယ်နေရာ မှာရှိသလဲလို့ လာလည်းမေးရော ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်၊ ပါးစပ်က အာစေးထည့်ထားသလို ပြောမထွက်၊ တိုးရစ်က တစ်လုံးချင်း အသံအကျယ်ကြီး ထွက်ပြောတာကိုလည်း နားမလည်၊ အင်း- အဲ လုပ်ရင်း ကိုယ်ပြောချင်တာက တစ်မျိုး၊ တစ်ကယ် ညွှန်ပြလိုက်တာက တစ်ခြားနဲ့ ဧည့်သည် လည်း ရောက်ချင်ရာရောက်။ နောက်ပိုင်း သွေးအေးသွားသည့်အချိန်ပြန် စဉ်းစားလိုက်မှ ငါ ဒီလို ပြောလိုက်ရင်ရတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုပြောဖို့ သတိမရခဲ့ရတာလဲ ဟု မကြေမချမ်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြစ်တင်ရသည့်အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးကြမည် ထင်ပါသည်။
မိမိတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါ။ စာသင်သားအများစုဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ကိုယ်ပြောတာကို သူများနားလည်၊ သူများပြောတာကိုလည်း ကိုယ်ကနားလည် ဖြစ်ချင်ပါက အောက်ပါနည်းလမ်းများက မိမိဆန္ဒများကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းကို သင်တန်းသား များစွာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အများစုကတော့ အင်မတန်ယျေဘုယျ ကျတဲ့ အဖြေ ကိုပဲပေးတတ်ကြပါတယ်။
”အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ချင်လို့” ”I want to speak English.”
”အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်လို့” ”I want to improve my English.”
”အင်္ဂလိပ်စာက နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာဖြစ်လို့” ”... because English is an international language.”
နည်းနည်းလေးတိုးတက်တဲ့ တပည့်တွေကတော့ . . .
”အလုပ်အတွက်လိုအပ်လို့” ”I need it for my job.”
”ပညာရေးအတွက် လိုအပ်လို့” ”I need it for my study.”
ဒီအဖြေတွေမှားသလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မပြည့်စုံပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြော တတ်ချင်လို့ ဆိုတဲ့သူကို ဘာလို့ပြောတတ်ချင်ရတာလဲ။ ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲ၊ ဘာအတွက် ပြောမှာလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာပြောမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ပြောတတ်ချင်တာလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေ ဆက်မေးလျှင်တော့ ရေရေရာရာမရှိဘဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအဖြေတွေသာ ရတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်ရတာလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ်မိမိသိအောင် ဦးစွာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး လေ့လာရမည့် နည်းစနစ် ကွဲပြားသွား နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကိုဈေးသွားဝယ်မယ့်သူတစ်ယောက်အတွက်သင်ခန်းစာနဲ့ ကျောင်းသွားတက်မယ့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် လိုအပ်ချက် ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ၄င်းစွမ်းရည်တွေ တတ်ကျွမ်းအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားရမည့်နည်းနာ တွေလည်း ကွဲပြားမည်ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။
စကားပြောရခြင်း၏ အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အဓိကအကျဆုံး ရည်ရွယ်ချက်သည် “ဆက်သွယ်ခြင်း” သတင်းပေးဖို့ /ယူဖို့ အတွက်ဖြစ်သည်။ (communication purpose) မိမိအင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ကြောင်း ကြွားဝါဖို့မဟုတ်၊ ဂုဏ်ယူဖို့ မဟုတ်။ (စာဖတ်သူအနေဖြင့် ခေတ္တရပ်၍ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မှန်သည်ဟုယူဆပါက ဆက်ဖတ်ပါ။)
ကိုယ်ပြောတာ၊ ရေးတာမှန်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်လျှင် ရှိတ်စပီးယားထံမှာ သင်ယူပါ။
သင်ဟာ ရှိတ်စပီးယားမဟုတ်ပါ။ မတ်တွိန်းမဟုတ်ပါ။ ဂျက်လန်ဒန်မဟုတ်ပါ။ ဂျိန်းအော်စတင် မဟုတ်ပါ။
သင်သည် သာမန် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ သူတို့ကဲ့သို့ အပြောင်မြောက် ဆုံးစကားပြေ သို့မဟုတ် အပြောစကားမျိုး ဖန်တီးရန်သင့်မှာ တာဝန်မရှိပါ။ သင့်မှာ မှားနှိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ မှားမှာကို မကြောက်ပါနှင့်။ အမှားတွေ့ဖူးမှ အမှန်ကိုသိပါမည်။ အမှားကို ကြောက်နေပါက သင်ဘာမျှ ဖန်တီးဖို့ သတ္တိရှိမည် မဟုတ်ပါ။ Guiora (1973) ဆိုတဲ့ပညာရှင် ကတော့ ၄င်းဖြစ်စဉ်မျိုးကို ego permeability မရှိခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ် စကားသွက်သွက် လက်လက် ပြောချင်ရင် လူရှေ့ သူရှေ့မှာ ပြောရဲဖို့အားမွေးထားပါ။
(ချွင်းချက်။ ပင်ကိုယ်က နှုတ်နည်းသူ၊ အရှက်အကြောက်ကြီးသူတွေအဖို့ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာ စကားနဲ့တောင် ပြောရဆိုရမှာခက်နေကြတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုလျှင်တော့ အင်မတန်ဝန်လေးစ ရာပင်။ ထိုသူများအတွက်တော့ သီးခြားရေးပါမည်။)
မှန်ဖို့အဓိကလား သွက်ဖို့အဓိကလား (Accuracy vs Fluency)
တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာ ကထိကတစ်ယောက်။ စာရေးလျှင်တစ်လုံးမှမှား၊ စကားပြောလျှင် တော စာတစ်ကြောင်းပြောဖို့ မနည်းစဉ်းစားပြီးထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ပြောရသည်။ (မယုံမရှိပါနှင့်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပါ)
သံရုံးမှာလုပ်သည့် ထမင်းချက်တစ်ယောက်။ စာတစ်လုံးမှ မတတ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောလျှင်တော့ လျှောကနဲ။ တက္ကသိုလ်ဆရာက ထမင်းချက် ပြောသမျှ သဒ္ဒါနည်းလမ်း မကျဟုထင်သည်။ တကယ်လည်း မှားနေသည်။ ဒါပေမယ့် သူက မှားပေမယ့် သွက်သည်။ သူ့စကားကို တစ်ဖက် လူနားလည်သည်။ ဟိုဆရာကတော့ မမှား။ ဒါပေမယ့် မသွက်။ ထစ်ငေါ့နေတော့ သူပြောသမျှ စကားကို ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီးနားလည်ဖို့ တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်မရှည်၊ နားမလည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆက်သွယ်ရေးမအောင်မြင် (communication breakdown) ဖြစ်ရတော့တာပေါ့။
သွက်ဖို့ အဓိကလား၊ မှန်ဖို့ အဓိကလားဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အသုံးချ ရမည့် အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီးသာ ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။
ကျွန်တော်၏အယူအဆအရဆိုလျှင် စကားပြောရာမှာ သွက် ဖို့ကအရင်ဖြစ်သင့်ပါသည် (fluency first)။ မှန်ဖို့ကနောက်မှ လိုက်သင့်ပါသည်(Accuracy later)။ စာရေးလျှင်တော့ မှန်ဖို့နှင့်တိကျဖို့က အရေးအကြီးဆုံးဟု ၀န်ခံပါသည်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာ တစ်ခုက သွက်သွက်လက်လက်ပြောတတ်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်နောက်က ကျားလိုက်သလို စကားကို အသက်မရှူဘဲပြောချင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပြောချင်တာကို သဒ္ဒါနည်းအရ မှားနေသော်လည်း နားထောင်သူ နားလည်အောင် အထစ်အငေါ့မရှိ ပြောတတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောပြော၊ မြန်မာစကားပဲပြောပြော၊ မိခင်ဘာသာစကားကို ပြောသူများ သဒ္ဒါ နည်းမကျသည့်ဝါကျများကိုပြောနေကြသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ ”I don’t want no money” ကဲ့သို့ double negative များကို ဟောလီးဝုဒ်၏နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များ ပြောနေကြပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ”ဥက္ကဌကြီးအား မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်......” ဆိုသည့် စကားအမှားကို ပြောလွန်း၍ ကြည့်မရသည့် မြန်မာစာဌာနက နေ့တိုင်း မြန်မာစာ မြန်မာစကား ဆိုသည့်အစီအစဉ်ကို ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ထုတ်လွှင့်နေရသည်မဟုတ်ပါလော။
ထို့ကြောင့် မိခင်ဘာသာစကားကို ပြောသူများပင် သဒ္ဒါ အမှား ပြောမိသည်ဆိုပါက ကျွန်တော် တို့လို နိုင်ငံခြားဘာသာအဖြစ် သင်ယူသူများအတွက် အမှားဆိုတာ ကြောက်စရာတစ်ခု မဖြစ်သင့်ပါ။
ဒီလိုပြောလို့လည်း မှားချင်မှားပါစေ။ ကိုယ်ပြောချင်တာအရမ်းကာရော လျှောက်ပြောရလျှင် ပြီးရောလို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။
ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာက ပြောရဲဖို့ကပထမ၊ ပြောရင်းနဲ့ မှားသွားတာကို သိပြီး နောက်တစ်ခါထပ် မမှားတော့အောင် အမှန်ကို ပြောတတ်ဖို့ အဓိက (Broken English to Spoken English) ဆောင်ပုဒ်ကို ကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်။ ပြောပါ။ မှားလျှင်ပြင်ပါ။
စကားထောက် (fillers) များသုံးပါ။
စကားလုံးတိုင်းကို ပီပီသသနဲ့ ရေပက်မ၀င်ပြောသည့်စကားကို သင် ကွက်စိပ်ဟောဆရာနှင့် ဇာတ်သဘင်တွေမှာပဲကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ့် အပြောစကားစစ်စစ်မှာတော့ ရပ်တဲ့နေ ရာရပ်၊ စကားထပ်သည့်နေရာထပ်၊ အမှားပြန်ပြင်သည့်နေရာပြင် စသည်ဖြင့် ပြောကြရတာပါ။ BBC World Service ကထုတ်တဲ့ Better Speaking ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးထဲက ဥပမာတစ်ခု ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
“This was my dream, all my life and ... er... you know.... to serve for the match, suddenly I haveamatch point out of nowhere, you know.... I came here, nobody even talked about me and now I’m holding this trophy. And it’s, it’s just.... this support today is like ... er.... I mean....I was..... er... three times in the final but this, this is just unbelievable, this is too good... . ”
ဒါဟာ တကယ့်အပြင်မှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပါ။ သဒ္ဒါမမှန်တဲ့ဝါကျ၊ မပြည့်စုံတဲ့ဝါကျ၊ ပါပေမယ့် ဒီလိုပဲပြောကြတာပါ။ ချရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုရွတ်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး er တို့ you know, I mean တို့ စတဲ့ fillers လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ထောက် ပြီးနောက်ပြောမယ့် စကားအတွက် စဉ်းစားချိန်ယူသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စကားသွက်ဖို့အတွက် fillers တွေကို သူ့နေရာနှင့်သူ နည်းလမ်းတကျ သုံးတတ်ရန် လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
Learnalanguage in chunks ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားလေ့လာမှုဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်လေးကို သဘောကျလို့ ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းတွေ နားထောင်တော့ “coming up next...”, “thank you for watching...” စတဲ့စကားတွဲလေးတွေကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ နားထောင်တာ များလာတော့ နားလည်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစကားလုံးတွဲတွေကို chunks ကိုခေါ်ပါတယ်။ ၄င်းကဲ့သို့ စကားလုံး အတွဲလေးတွေကို လေ့လာမှတ်သားထားပါက မိမိပြောဆိုဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတစ်လုံးချင်း စဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမှားအယွင်းလည်းနည်းသွားတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက collocation လို့ခေါ်တဲ့ အတူတကွ တွဲဖက်သုံးစွဲရတဲ့ စကားလုံးတွေကိုလည်း မှတ်သားထားရပါမယ်။ do your homework လို့ပဲသုံးလေ့ရှိပြီး make your homework လို့မသုံးပါဘူး။ do နဲ့ make က ပြုလုပ်သည်။ အတူတူပဲလို့ မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်ရင် မှားပေလိမ့် မည်။
Posted by Myint Ko at 8:39 PM 1 comment:
“ကိုင်း … ၁၃ နှစ်သမီးလေးကို ထိတွေ့စို့ …လူစုံပြီ”
ကိုမြတ်ဝင်လာတာနဲ့ သက်တမ်းရင့် ၀ီစကီပုလင်းကိုလှမ်းရင်း ကိုလေးက ပြောတော့ ၀ီစကီဖန်ခွက် ရေခဲ ဆော်ဒါဘူးတွေ အဆင့်သင့်ပြင်ပေးဖို့ မောင်ဌေးကို တိုးတိုး မှာရတယ်။ လူစုံအောင် စောင့်နေရင်း တချို့က ၀ိုင်၊ တချို့က ဘီယာသောက်နေကြတဲ့အတွက် ဘီယာခွက်တွေကိုပါ သိမ်းလိုက်ဖို့ ပြောရတယ်။ အင်း ကလေးတွေတော့ ခွက်သိမ်းရ ဆေးကြရနဲ့ အလုပ်များကြဦးမှာပဲ။ တခါတခါ စဉ်းစားမိတယ်။ တခါသုံးခွက်တွေနဲ့ဆို ကလေးတွေသက်သာမှာလို့။ ကိုလေး အော်ဟစ်သံကြီး အရင်ဆုံး ထွက်လာမှာ မြင်ယောင်မိပြီး ကျောတွန့်သွားတယ်။ သူက ဘယ်အရည်ကို ဘယ်ခွက်နဲ့၊ ဘယ်ဟင်းကို ဘယ် ဇွန်း၊ ခက်ရင်း ဆိုတာမျိုးတွေ အတော် အရေးထားတဲ့သူကိုး။ ကျွန်မကိုလည်း ထမင်းဝိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ တကူးတက သင်ပေးခဲ့တဲ့ လူပဲ။
၀ိုင်ခွက်ကိုင်ထားရင်း ယောက်မကပြုံးပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်မ မီးဖိုဘက် ထွက်ခဲ့တယ်။ ကြက်ကြော်နဲ့ ဟင်းပွဲတွေကို တဖြည်းဖြည်း ချပေးရမှာ။ ပြန်မလာတာ ၁၀ နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ စုကြတာဆိုတော့ အချိန် ကန့်သတ်ချက်မရှိ ကြာတော့မယ်။ မီးဖိုထဲက ကလေးတွေကို အရင် ဗိုက်ဖြည့်ခိုင်းဦးမှ ဖြစ်တော့မယ်။
“မိသက် ဘယ်ရောက်နေလဲ… ဒီ လာထိုင်လေ။ ငါ့တို့ကို ကြက်ကြော် ထပ်ချပေးဦး”
“သက်သက် ကိုယ်တို့နဲ့အတူ လာထိုင်စားပါ။ ပြီးတော့ ကိုမြတ်ကို ထမင်းနည်းနည်း ထည့်ပေးပါလား”
ခင်းကျင်းထားတဲ့ စားပွဲမှာ ဟင်းတွေက အမျိုးစုံ။ ငါးရံ့ခေါင်းဟင်းရော ငါးခြောက်ထောင်းကြော် ငါးပိကြော်ရော တရုတ်ဟင်းလျာတွေရော ဂျပန်စာလည်း ပါသေးတယ်။ ငါးရံ့ဟင်းက ကိုမြတ် အကြိုက်ဖြစ်ပြီး အညာက တကူးတက ဆင်းလာတဲ့ ကိုဝက်ကြီးကတော့ တရုတ်တန်းက ၀က်ခေါက်ကင်နဲ့ ဘဲကင်ကို အသည်းစွဲကိုး။ ကိုလေးက သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့အရာကို ခင်းကျင်းတည်ခင်းပေးခြင်းဖြင့် သူ ဘယ်လောက် သူငယ်ချင်းတွေကို အရေးထားလည်းဆိုတာ ပြချင်သူပါ။ အရင်ကတည်းကလည်း သူ ဒီလိုတာဝန်ကျေ လှိုက်လှဲလွန်းလို့ ဒီအိမ်မှာပဲ လူစုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အန်တီနု၊ မကြီးနဲ့ ကျွန်မတို့ကပဲ အမြဲလိုလို စီမံ ချက်ပြုတ်ရတာပါ။ ယောက်မကတော့ ချိုသာ စကားပျုငှာ ပြောတတ်သော်လည်း မီးဖိုချောင်ကိုတော့ ကောင်းစွာ စီမံလေ့ရှိသူ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ပွန်းသည် အလုပ်ပြောင်းရာလိုက်သွားတဲ့ မကြီးက ယောက်မကို တို့အိမ်ရဲ့ အထာကို နှစ်များစွာကြာလည်း သိလာမယ့်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ချဖူးတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မ မလာချင်ဘူး။ ကိုမြတ်ပြန်လာလို့ လုပ်တဲ့ပွဲမို့ ဆက်ဆက်လာပါလို့ တရရ လုပ်နေလို့ပဲ။
အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုပွဲတွေရှိရင် လူစုကြ၊ ရယ်မောပြောဆိုကြ၊ ဂစ်တာတီးကြ၊ သီချင်းဆိုကြနဲ့ မှတ်မိသလောက်တော့ အပြင်းတွေကို သိပ်မသောက်ကြဘူး။ ဘီယာနဲ့ပဲ ပြီးသွားကြတာဘဲ။ အခု နောက်ပိုင်း ကိုလေးတို့အိမ်မှာ ပွဲလုပ်တိုင်း တော်တော် သောက်နေကြတာ သတိထားမိတယ်။
ကိုလေး သူငယ်ချင်းတွေအထဲ ကိုမြတ်ကို အရင်းနှီးဆုံးပဲ။ သူ့နောက်ဆုံးနာမည်ကို ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးက ဆင်းသက်လာသူ၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ပညာဥစ္စာပြည်စုံသူ၊ အမေ့စကားအရ ရိုးစဉ်ကောင်းက ဆင်းသက်သူပါ။ ဆင်းသက်ကြီးပြင်းတဲ့ မျိုးရိုးနဲ့ လျော်ညီစွာ အနေအထိုင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ အပြောအဆို အဆင့်အတန်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
ဘဘနဲ့ ကိုမြတ့်မာမီက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းနေဘက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘဘ စစ်သံမှုးဘ၀နဲ့ တိုင်းတပါးမှာ ရောက်နေခိုက် ကိုမြတ်တို့မိသားစုနဲ့ ပြန်တွေ့ကြပြီး နှစ်အိမ်ထောင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။ အိမ်မှာ ဧည့်ခံပွဲ ထမင်းစားပွဲ လုပ်တိုင်း ဖိတ်ရတဲ့ စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက အမြဲပါတယ်။ သူတို့ဖိတ်ရတဲ့လူကလည်း ထပ်နေတာ။ ဒီလူဒီလူတွေပဲ လှည့်ပတ်ကျွေးမွေး ဧည့်ခံနေကြတာကိုး။ ကိုမြတ်မာမီမို့ အိမ်လာရင် ကျွန်မတို့မှာ ငေးနေရတာ။ အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင် လက်ဝတ်လက်စားက အန်တီနု မပြောနဲ့၊ မကြီးတောင် လုံးလုံးမမီဘူး။ အန်တီနုတို့ စိန်နားကပ်အပါးဝိုင်းတွေကို ရတီဘယ်လောက်ဆိုပြီး တလုံးထဲတွေ ၀တ်နေချိန်မှာ ကိုမြတ့်မာမီ ပန်ထားတာကတော့ အကျီအရောင်နဲ့ လိုက်အောင် ခရမ်းစွဲ၊ ကြောင်၊ မဟူရာ၊ နီလာပြာ၊ နီလာဖြူ၊ ကနုကမာ၊ ပုလဲ နဲ့ ကျောက်ရောင်စုံတွေ။ လည်ပင်းမှာလည်း အရောင်တူ ဆွဲကြိုးအရှည်နဲ့။ သူ့ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းကာ ကျောင်းနေဖက်တွေနဲ့ တပြည်လုံး လည်ပတ်နေတတ်တယ်လို့ ဘဘ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ တခါတလေ ဘဘကို ‘ယူ့ကို အိုင်ပြောစရာရှိလို့ကွာ’ ခပ်တည်တည် ပြောပြီး ‘နုရေ ခဏကွယ် ကိုယ်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြောစရာရှိလို့’ ဆိုကာ အန်တီနုကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ခွင့်တောင်းတယ်။ နောက် နာရီနဲ့ချီကာ ဘဘနဲ့ စကားပြောနေတတ်သေးတယ်။ အန်တီနုတောင် အနားမလာအောင် ခွင့်တောင်းပုံက သဘောကျချင်စရာ။ ဖတ်ဖူးစွဲလမ်းဖူးတဲ့ ၀တ္တုတခုက အခြေမြင့်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်တခုကို သူ့ မြင်တော့မှ အပြည့်အ၀ နားလည်တော့တယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းဆို အိမ်ကို ၀င်ဝင်လာတတ်တဲ့ ကိုမြတ်က ဈေးပို့ပေးဖို့ ကိုလေးကို နှိုးနေတဲ့ ကျွန်မကို သူ့သူငယ်ချင်းအိပ်ပါစေလို့ ပြောပြီး ဈေးလိုက်ပို့တယ်။ ခြင်းအလေးကြီးနဲ့ ကျွန်မ ပြန်ထွက်လာတာ မြင်တိုင်း ပြေးလာ ကူဆွဲပေးတယ်။ လမ်းမှာ ဗွက်အိုင် ရေအိုင်တွေ့ရင် ဆိုက်ကား သို့မဟုတ် လူ ရှိနေရင် ဖြည်းဖြည်းသာသာနဲ့ ဘီးလှိမ့်ရုံသာ အိုင်ထဲ ချမောင်းတတ်တယ်။ ရေအိုင်ကို အရှိန်နဲ့ဖြတ်တဲ့ ကားတွေကြောင့် ခဏခဏ ရွှံရေစင်ဖူးလို့ ဒေါသထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မဟာ သူ့အပြုအမူတွေကို သိပ်ကို နှစ်သက် သဘောကျမိပါတယ်။
လမ်းထိပ်က ကွမ်းယာသည်ကိုရော လမ်းဘေး ဓာတ်ဆီဆိုင်ကလူကိုရော ငှက်ပျောသီးအထမ်းသည်ကိုရော ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာချင်းထပ်အောင် စကားပြောဆိုတတ်သူပါ။ သူတို့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာစကား ပြောဆိုတာကိုက အရည်အချင်း တခုကိုး။ သူ သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးလွန်းတော့ ကိုယ်ဘာသာတောင် ရှက်စနိုး ဖြစ်ရတယ်။ စကား ဆတ်ဆတ် ပြောလို့ ကျွန်မကို ကိုလေး ခဏခဏ ဆူတယ်။
တရက် ကျောင်းစားသောက်ဆိုင်တန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မကိုမြင်ပြီး ကိုမြတ် ပိုက်ဆံလာရှင်းပေးသွားတယ်။ သူ့ကားပေါ်ပါလာတဲ့ ကိုဝက်ကြီးက ကျွန်မကို ကျောင်းမှာမြင်တော့ အံ့သြနေတယ်။ ကားနဲ့လာတဲ့ အရပ်မြင့်မြင့် ချောချော အကိုကြီးတယောက်က ပိုက်ဆံလာရှင်းပေးသွားလို့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အံ့သြကုန်ပါတယ်။ ကိုမြတ်နာမည်ကြားတာနဲ့ လူရေလည်တဲ့ မိသူက “ဟာ” လို့ ထအော်တယ်။
ကိုလေး သူငယ်ချင်း အတော်များများဟာ ကျွန်မကို ဘဘနဲ့ အန်တီနုတို့ရဲ့ အခြွေအရံတယောက်လို့ပဲ အထင်ရှိကြတယ်။ သူတို့ လာစားသောက်တိုင်း ဒီအိမ်မှာ ကျွန်မက ကူဖော်လောင်ဖက်လုပ်နေတာ မြင် မြင် နေရတာကိုး။ ဘဘနှမက မွေးတဲ့ တူမအရင်းဖြစ်တာ ကိုမြတ်ပဲ အ၀င်အထွက်များလို့ သိတယ်။ တနင်္ဂနွေညနေ အဆောင်ကို ပြန်ဝင်ရချိန်တွေမှာဆိုရင် ကိုမြတ် အိမ်အပြန်နဲ့ ကြုံရင်တော့ ၆ မိုင်ခွဲထိပ်အထိ လမ်းကြုံလိုက်လို့ ရပါတယ်။
ကိုလေးကတော့ ကျောင်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာတောင် မခေါ်တတ်တဲ့လူပါ။ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ ကျွန်မကို သူ့အခြွေအရံလို့သာ သဘောထားရှိသူပါ။ အမေပို့လိုက်တဲ့ ကျွန်မ ပိုက်ဆံထုပ်ကို လုံးဝရှာမတွေ့အောင် ရေခဲစက်ထဲ ထည့်ထားပြီး ကျွန်မ ဒေါသထွက်အောင် စမယ်။ ပိုက်ဆံထုပ်ကို ရေခြောက်အောင် လုပ်နေရင်းနဲ့ မီးပူတိုက်ရင်းနဲ့ အဆောင်ကို ပြန်အ၀င်နောက်ကျအောင် အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ ပိတ်ရက်လေး ခဏလာတဲ့ နှမ၀မ်းကွဲကို ငါးရံ့ခေါင်း ဟင်းချက်ပေး၊ ငါးပိကြော်ပေး၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်၊ ကြက်ကြော်ကြော်ပေးဆိုပြီး မျိုးစုံအောင် ခိုင်းစားတတ်သူပါ။ ‘ဒေါ်လေးလက်ရာကို နင် မမီသေးဘူး’ လို့ ချက်တဲ့သူ အောင့်သက်သက်ဖြစ်အောင် စားအပြီး မှတ်ချက်ချသေးတယ်။
ကျွန်မ ပထမနှစ်တက်ဖို့ ရွာက ထွက်လာခါစမှာပေါ့။ သူတို့အုပ်စုတွေ အောက်ထပ်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်း ကျွန်မ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားတာမြင်တော့ လှေခါးမီး ပိတ်ပေးဖို့ ကိုလေးက အင်္ဂလိပ်လို လှမ်းပြောပါတယ်။ ကျွန်မ ချက်ချင်းပိတ်ပေးလိုက်တော့ ကိုလေး အံ့သြသလိုနဲ့ “ ငါ မီးပိတ်ခိုင်းမှန်း နင် ဘယ်လိုသိလဲ” သူ့သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ထုတ်မေးပါတယ်။ ကျွန်မက ‘အစအဆုံး နားမလည်ပေမယ့် Off ကိုသိတယ်။ လှေခါးမီးပွင့်နေတာကို သတိထားမိတယ်’ လို့ ရိုးစင်းစွာ ဖြေမိရက်သား ဖြစ်သွားတယ်။ “မဆိုးဘူး နင် ဥာဏ်ကောင်းတယ်” လို့ ကိုလေး ရယ်ရင်းပြောတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေမှတော့ ကျွန်မကို ကျောင်းမှာတွေ့တော့ ကိုဝက်ကြီး အံ့သြတာပေါ့။
ဘဘကလည်း သူ့နှမလက်ရာ ငါးပိကြော် ငါးခြောက်ထောင်းကြော်ကို အတော်စွဲလန်းသူဆိုတော့ အမေလာတိုင်း ယူလာပေးနေရတာ ထုံးစံဖြစ်နေပြီ။ အမေက သူ့အကိုကြီးကို တမိပေါက် တယောက်ထွန်းမို့ အမျိုးကို ဂုဏ်ဆောင်သူ ရွာကို ဂုဏ်ဆောင်သူအဖြစ် အတော်ကိုးကွယ်ပါတယ်။ ရွာက အိမ်မှာ ဘဘ ယူနီဖောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအောက်မှာ ရာထူး အပြည့်အစုံကို ရေးကပ်ထားတာပါ။ အိမ်နဲ့ ဓာတ်ပုံက တော်တော် မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ အဖေ ဟားလည်း ခပ်တည်တည်ပဲ။ သိသလောက်တော့ အန်တီနု၊ မကြီးနဲ့ ကိုလေးတို့ ရွာကို တခါမှ မလာဖူးဘူး။ ဘဘ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ပြန်မလာတာ၊ သူတို့ စိတ်ကူးရှိပုံမရတာ အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်း လာရင်လဲ ပြသနာများမှာပဲ။ ရွာလမ်းက ဖုန်တွေကြောင့် မကြီး မဲ့သွားနိုင်သလို အိမ်က အိမ်သာကြောင့် ကိုလေး အော်မှာပဲ။
အန်တီနုကတော့ သူ တပြားတချပ်မှ မထောက်ပံ့ရတဲ့အပြင် လယ်ကရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ဆိုပြီး မှန်မှန်ကြီး ပိုက်ဆံလာပို့နေတဲ့ ယောက်မကို ကြည်ဖြူပေမယ့် လူနေမှုစရိုက်၊ အနေအထိုင်၊ အဆင့်အတန်း မတူလှတဲ့အတွက် တန်းတူရည်တူစိတ် မထားနိုင်တာ ကျွန်မ ခံစားသိ သိပါတယ်။ အမေက ကျွန်မကို ဒီအိမ်ကနေ ကျောင်းတက်စေချင်တာ။ အဖေနဲ့ကျွန်မတို့ သဘောထားကြောင့်သာ အဆောင်မှာ ပေးနေတာ။ အဖေက ရှင်းတယ်။ နင့်အကို ရာထူးကြီးကြီးမာစတာဖြစ်လည်း ငါတို့ စပါးတတင်း ပဲတတင်း ပိုရတာမှ မဟုတ်ဘဲတဲ့။ အကိုအတွက် စားစရာ လုပ်ပြီး မော်တော်တတန်၊ ကားတတန်၊ သဘောင်္တတန်နဲ့ သွား သွား ပို့နေတာကို မကြိုက်လှဘူး။ မပြောသာလို့ပဲ။
မကြီးက ဖာသိဖာသာ နေတဲ့စရိုက်ရှိပြီး ကျွန်မကို စိတ်မှန်နဲ့ ဆက်ဆံတယ်။ ညီမရင်းချာလို့ နွေးထွေးလှိုက်လှဲတဲ့စိတ် မရှိပေမယ့် နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတတ်သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စာအုပ်ထဲမှာသာ ဖတ်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားက နာမည်ကြီးတံဆိပ် အကုန်လုံး သူ့ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ၊ ဘီဒိုထဲမှာရှိတယ်။ သူ ကျွန်မကို ပေးလိုက်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ၊ တကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းတွေကို မိသူက ‘ဒါ စကော့ဈေးထဲ ရှာလို့မရနိုင်တာတွေ’ လို့ပြောပြီး လိုချင်စိတ် ပြလွန်းလို့ သူ့ကိုပဲ ပေးလိုက်တာ များပါတယ်။ မကြီးကို အမြဲ ကျေးဇူးတင်ရတဲ့အချက်က အတွင်းခံ အ၀တ်အစားကို ဂရုတစိုက် ၀တ်တတ်အောင် ကြပ်ကြပ် သတိပေးခဲ့လို့ပါ။ ‘နင့် အတွင်းခံက နင်ဝတ်ထားတဲ့ အပြင်အကျီထက် ၃ ဆလောက် ဈေးကြီးနေပါလား’ လို့ မိသူက ထုတ်ပြောရတဲ့အထိဘဲ။
ကျွန်မ ကျောင်းပြီးချိန်မှာ ကုမ္ပဏီတွေထောင်ခွင့်ပြုလိုက်တော့ ကိုမြတ်တို့မာမီနဲ့ အန်တီနုတို့ စုပေါင်းပြီး ကုမ္ပဏီ ထောင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကို ထမင်းကျွေးရတာ ဆက်တိုက်လိုလိုပဲ။ မကြီး တော်တော် ပင်ပန်းတဲ့ကာလတွေပဲ။ သူ့ မဟာဘွဲ့အတွက် စာတမ်းနဲ့ ဧည့်သည်ထမင်းကျွေးပွဲတွေနဲ့ လုံးထွေးရလွန်းလို့ ကျွန်မကို လက်တိုလက်တောင်း ခိုင်းဖို့ အမြဲ လာလာ ခေါ်ရတဲ့ကာလလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ တရက်တော့ ဂျပန် ဧည်သည်တွေကို နေ့လယ်စာကျွေးဖို့ရက်မှာ မကြီးက သူ့ဆရာကြီးနဲ့ တွေ့ရမှာဆိုတော့ လုံးလုံး မအားတာနဲ့ ဟင်းပွဲ အစအဆုံးကို ကျွန်မ ချက်ရတော့တာပဲ။ ကိုမြတ့်မာမီက ခါတိုင်းဆိုရင် “နု ယူ့သမီးက ဟင်းချက်သိပ်တော်တာပဲကွယ်” ဆိုပြီး ချီးမွမ်းနေတတ်သူပါ။ အန်တီနုက “ဒီနေ့ သမီး မအားလို့ကွယ်။ တူမကလေးကို ချက်ခိုင်းထားရတာ တခုခု အဆင်မပြေရင် ပြောနော်” ဆိုတော့ စကားဆိုတဲ့နေရာမှာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ ကိုမြတ်မာမီက “အေးကွယ် ဟင်းချက်ထားတာ ယဉ်လိုက်တာ”တဲ့။ ကျွန်မဖြင့် အခုအချိန်ထိ ဟင်းချက်တာကို ယဉ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောမှန်း စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ညံ့တယ်ပြောချင်တာလား မဆိုးပါဘူးပြောချင်တာလား တွေးမရဘူး။
ကျောင်းဆက်မတက်ခင် သူ့တို့ကုမ္ပဏီမှာ ခဏ ၀င်လုပ်လိုက်သေးတော့ ကိုမြတ့်မာမီနဲ့ နည်းနည်း ရင်းနှီးလာတယ်။ သူ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ နားယဉ်လာရတယ်။ သူ့လေယဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးလို့ လွယ်လွယ်လေး ပြောတာကိုပဲ အစပိုင်းမှာ သုံးခါလောက် ပြန်မေးရပြီး နောက်တော့ လေသံ ဖမ်းမိသွားတော့တယ်။ တစီးပွားတည်းဖြစ်ဖို့ မကြီးနဲ့ကိုမြတ်ကို ရည်ရွယ်ကြပေမယ့် မကြီးနဲ့ တွဲနေတဲ့တယောက်ရဲ့ အဖေက အရေးပါတဲ့ နေရာတခု ဗြုန်းဆို ရောက်လိုက်တာနဲ့ အန်တီနု စိတ်လည် ထွက်သွားတော့တယ်။
“ယူ သိတယ်မဟုတ်လားကွယ်… အိုင့် ယောက်မတွေက အနေစုတ်ပေမယ့် ရွှေထုပ်ကြီးတယ်ဆိုတာလေ။ အိုင်ကတော့ ယူကို တကယ်ပိပိပြားပြား ချွေးမလေး ရစေချင်လို့ပါ ”
အဲဒီစကားကို အန်တီနုပါးစပ်က ထွက်လာချိန်မှာ ကိုလေး အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီ။ သူတွဲလာတဲ့ အများကြီးတွေထဲက တယောက်မှမရွေးဘဲ အန်တီနု ရွေးချယ်တဲ့ ‘ဘယ်သူ့မြေးလေ’လို့ ပြောရင် အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ အလေးထားရတဲ့ တယောက်ကို တချက်မှ မတုံ့ဆိုင်းဘဲ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ စပ်တူလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ကိုလေး ဦးဆောင်လည်ပတ်နေပြီး တန်ဘိုးက တော်တော်မြင့်လာတော့ ကိုမြတ်တို့ရှယ်ယာကို ပြန်အမ်းရင် ငွေသား အတော်ပြန်ထုတ်ပေးရမယ့် အချိန်ဖြစ်နေပြီ။ ကိုလေးလည်း သူ့မိန်းမနောက်ကွယ်မှာ နည်းနည်းမူးလာတာနဲ့ “မချစ်တဲ့လူကို ယူလိုက်တာ ငါ မှားသွားတယ်မိသက်ရ” လို့ ဗလုံးဗထွေး ပြောတတ်နေပြီ။ ကျွန်မက ကျောင်းမှာ ဆရာမ ပြန်လုပ်နေချိန်ဖြစ်ပြီး ကိုမြတ်က သူ့ နောက်ဆုံးတယောက်နဲ့ ပြတ်နေချိန်ပါ။
‘အကိုကြီးနဲ့ မမက သမီးအတွက် စီစဉ်နေတာ သူတို့စေတနာကို သိပြီး စကားနားထောင်ပါ’ လို့ အမေ လေသံပစ်တယ်။ အမှတ်မဲ့ သရော်ပြုံး ပြုံးမိပါတယ်။ ကျွန်မ နားမထောင်နိုင်ပါဘူး။ အပြောင်အနောက်လိုလိုနဲ့ အတည်ဖြစ်လာတော့ ကျွန်မ ငြင်းပါတယ်။ သေသေချာချာကြီးကို ငြင်းတာပါ။ အန်တီနုက ‘မိသက် တော်တော်အမြင်မရှိတာပဲ’ လို့ အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဘဘက ခေါင်းခါရုံပါပဲ။ ဘာမှထပ်မပြောပါဘူး။ မကြီးက ‘မိသက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ မကြီး နားလည်တယ်’ လို့သာ မှတ်ချက်ပြုတယ်။ အားလုံးအထဲမှာ အပေါက်ကွဲဆုံးက ကိုလေးဘဲ။ နှစ်ချက်တောင် အတီးခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ သူက ကိုမြတ်ကို တော်တော်ခင်မင်သူဖြစ်ပြီး အနိုင်ကျင့်တတ်၊ အဖက်မတန် နှိမ်တတ်ပေမယ့် တခြားသူနဲ့စာရင် သူ့နှမ ဖြစ်ပေတာကိုး။
“နင်က ဘာကိစ္စနဲ့ ငြင်းရတာလဲ။ လူကြီးတွေက ကောင်းဖို့ စီစဉ်တာကို။ ဘာလဲ တွဲနေတာရှိလို့လား။ ငါ သိသလောက် မရှိဘူး မဟုတ်လား။ ရှိလဲ ဖြတ် …”
ကိုလေး အော်ဟစ်နေတာကို မြင်တော့ အသံထွက်တောင် ရယ်ချင်တာ။ ထပ်တီးခံရမှာစိုးလို့သာ မျက်နှာသေနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ ပုံစံချ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘ၀မှာ သူ နေနိုင်သော်လည်း ကျွန်မ မနေနိုင်ဘူးလို့ ရှင်းပြရင် ‘ကြီးကျယ် လှချည်လား။ နင်က ဘာကောင်မမို့လို့လဲ’ ပြောမှာ အသေအချာပဲ။
ကိုမြတ်နဲ့တွေ့တော့ “သက်သက် ဘာဖြစ်လို့လဲ” မေးပါတယ်။ အထက်တန်းကျတဲ့ မျိုးရိုးကောင်းတဲ့ ချိုသာတဲ့ စကားဆိုတတ်သူက သူ့မာမီ စကား နားထောင်မယ့်လူ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အပေါ်ယံ အမူအကျင့်သာ ကွဲလွဲလိမ့်မယ်။ သတ်မှတ်ပုံစံမှာ အသားကျနေတဲ့ ပုံက သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ တပုံစံထဲပါပဲ။
“ထူးထွေမရှိဘူး ကိုမြတ်။ ကိုမြတ်ကို မိသက်ရဲ့ ဘ၀အဖော်အဖြစ် စဉ်းစားလို့မရလို့ပါ”
ကိုမြတ်ကို နှစ်လိုစိတ်၊ ခင်မင်စိတ် ရှိပါတယ်။ ငယ်ကတည်းက ပါပဲ။ နှစ်လိုစိတ်သည် နှစ်လိုစိတ်အဖြစ်သာရှိပြီး၊ နှစ်လိုသူဖြစ်တာနဲ့ လူကြီး စီမံရာ ခေါင်းညိတ်တတ်သူမှ ကျွန်မက မဟုတ်တာ။ တနေ့ ကိုလေးလို မူးမူးနဲ့ မိသက်ကို မချစ်ဘဲ ယူလိုက်ရတာလို့ ကျွန်မကွယ်ရာ ပြောချင်ပြောနေဦးမှာလို့ တွေးမိသေးတယ်။
အဓိက အချက်တခု ရှိပါသေးတယ်။ သူ့မာမီကို ကျွန်မ ရိုကျိုးရသလို ကျွန်မရဲ့ အဖေနဲ့အမေကို ကိုမြတ်မို့လို့ ရိုသေစေဦးတော့ တန်းတူ မရှိပါဘူး။ လယ်ယာဧကများစွာနဲ့ ငွေကြေးဖူလုံပြည့်စုံပေမယ့် ကျွန်မအဖေကို ဘဘနဲ့တန်းတူ ကိုမြတ်မာမီက အလေးမထားနိုင်ပါဘူး။ သူ့ကိုလည်း အပြစ် မဆိုသာဘူး။ သက်သက်ကို ချွေးမအဖြစ် လျာထားကြည့်တာတောင် လွန်လှပြီဆိုတဲ့ အနေအထားကိုး။ ကျွန်မအမေ ချက်လာမယ့် ငါးပိကြော်ကို ယဉ်လိုက်တာလို့ အပြောခံရရင် အမေ ဘယ်လိုနေမလဲတွေးပြီး ပြုံးမိပါတယ်။
“ကိုလေး… အိမ်က လာကြိုနေပြီ၊ မိသက်ပြန်ပြီ။ ကိုမြတ်ရေ… ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်။ နောက်တခါဆို အမျိုးသမီးကိုပါ ခေါ်ခဲ့ပါဦး။ မြန်မာပြည် ရောက်ဖူးတာပေါ့ ”
ကိုမြတ်က ထ လာပြီး ကျွန်မ့လက်ကို အကြာကြီး ကိုင်ထားကာ ပြုံးတယ်။
‘သက်သက် လူကြီးလေးဖြစ်နေပြီ။ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းမြေ့ပုံရတယ်။ ငယ်ငယ်ကရုပ်အတိုင်းပဲ’ လို့ ဆိုပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို ကိုမြတ်တို့ ကိုဝက်ကြီးတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရတယ်။ အစကတည်းက ခေါ်လာခဲ့ရမှာလို့ ကိုမြတ်က အပြစ်တင်နေလို့ ‘သူ့ ပွဲရုံကိစ္စတွေ၊ ပဲတင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ မအားလို့ပါ ကိုမြတ်… မဟုတ်ရင် လိုက်လာပါတယ်’ လို့ ၀င်ဖြေရတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက “မင်းအမျိုးတွေ ဟန်များလွန်းတယ်။ အနေကြပ်တယ်” ဆိုကာ ဒီအိမ်မှာ လုပ်တဲ့ပွဲဆိုရင် တော်ရုံနဲ့ လိုက်မလာတတ်ဘူး။ ကားပေါ်ရောက်မှ …
“မင်းတို့ပွဲကလည်း နောက်ကျလိုက်တာ။ ကို နက်ဖြန် ရွာရောက်မှာ။ အိမ်ကို ဘာတွေ ထည့်ပေးမလဲ မေးဖို့ စောင့်နေတာ၊ ပြန်မလာနိုင်တာနဲ့ လိုက်လာရတယ်”
“မြို့ပေါ်က ဒိုင်မှာ စာရင်းရှင်းရုံပဲဆို။ နေ့ချင်းပြန်လာလို့ ရသားပဲဟာ။ ဘာလို့လဲ။ ရွာမှာ ညအိပ်စရာ ကိစ္စရှိလို့လား။”
“ရှိပါဘူးကွာ။ ယောက္ခမကြီးနဲ့ လေပစ်ပြီး အမေ့ လက်ရာလေး စားချင်လို့ပါ။ ညအိပ်မယ်လေ။ လိုက်ခဲ့ပါလား။ သားကတော့ အထုပ်တောင်ပြင်ပြီးပြီကွ။ သူ့အဘွားဆီကိုလည်း ဖုန်းဆက်ထားပြီးပြီ”
ကျွန်မ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မိတယ်။ အဖေနဲ့ သူ့သားမက် စက်ဆင်ပြီး ရွာက မိုက်ခဲတွေကို တညလုံး သီချင်းခေါ်ဆိုခိုင်းမှာ မြင်ယောင်မိလို့ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက နှစ်ရက်ဆက်တိုက် လုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီလေ။ အဖေဆိုရင် သားမက်နဲ့ မိုက်လု ဆိုရတာကို အခုထိ ပြောလို့ မဆုံးနိုင်သေးဘူး။ ရွာမှာ ညအိပ်တိုင်း သူတို့ စီစဉ်ကြစမြဲ။ ကျွန်မက ကျောင်းတဖက်နဲ့မို့ ခဏခဏ မရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ခင်ပွန်းသည်က စီးပွားရေးအရပါ ရွာနဲ့ အဆက်အစပ် ရှိလေတော့ ကိုယ်ထက်တောင် ရင်းချာသေးတယ်။
“ လိုက်ခဲ့မယ်လေ နေ့လယ်မှ သွားရင်ရမလား။ မနက်ပိုင်း စာသင်ချိန် တချိန် အတန်းရှိသေးတယ်”
ခုလောက်ဆို အမေကတော့ အိမ်တိုင် ရွာရောက် လာစားတဲ့ သူ့သားမက်အတွက် ငါးခြောက်ထောင်းကြော် ကြော်နေတော့မယ်။
Posted by Myint Ko at 4:12 PM No comments:
Labels: ကြိုက်သော စာ
“ပညာရှိ သူတော်ကောင်း အမျိုးကောင်းသား” (ဆရာစိုးမင်း)
လူဦးရေ သန်းပေါင်းခြောက်ဆယ်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ပညာရှိ သူတော်ကောင်း အမျိုးကောင်းသားစစ်စစ်ကြီးပါလို့ ပြောနိုင်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိပါ့မလဲ သိရခက်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဲသလိုပဲ ထင်နေကြတယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မဟုတ်မှန်းသိတောင် သူများတွေကတော့ အဲသလိုထင်လည်း နည်းသလားဆိုပြီး လူ့ရှေ့သူ့ရှေ့ကျရင် ဟန်ပန်ကြီးတခွဲသားနဲ့ ဟောက်စားလုပ်ချင်တဲ့သူတွေက ပိုများမလားပဲ။ ခက်တာက တကယ့်အစစ်ဆိုတာ ရဟန္တာဈာန်ပျံသလို ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးတဲ့သူ အလွန်ရှားသွားပြီမို့ သည်တခါတော့ အရုပ်ရေးပြတာမဟုတ်ပဲ လူပုဂ္ဂိုလ် အကောင်လိုက်ကြီးနဲ့ “သည်လိုလူမျိုးကိုခေါ်သကွ” ဆိုပြီး ဆွဲထုတ်ပြ လိုက်ချင်ပါတယ်။ ငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းရဲရင် ငြင်းကြည့်ကြပါဦး။ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင် လို့ ခေါ်ပါသဗျ။
သံသရာမှာ သတ္တ၀ါတွေ ကျင်လည်ရတဲ့အခါ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ဆုံးစမထင် အတွင်တွင် မရပ်မနား တသွားတည်းသွားကြရပါသတဲ့။ အဲသလိုသွားနေရင်းက ထပ်ကာထပ်ကာ သွားမိတဲ့ခရီးကိုလိုက်ပြီး သတ္တ၀ါတွေမှာ စရိုက်ရယ်၊ အထုံရယ်၊ ပါရမီရယ်လို့ ပါလာကြရပါတယ်။ စရိုက်ဆိုတာကတော့ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် ပြုနေကျအပြုအမူကြောင့် ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားမှာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘောကို ခေါ်တာနေမှာပေါ့။ ဆိုက်ကားသမားမှာ ဆိုက်ကားသမားစရိုက်ရှိမယ်။ ဆရာဝန်မှာ ဆရာဝန်စရိုက်ရှိမယ်။ စစ်ဗိုလ်စစ်သားမှာ စစ်ဗိုလ်စစ်သားစရိုက်ရှိမယ်။ အကျင့်ပါနေတာကြီးတစ်ခု စိတ်ရောကိုယ်ပါ စွဲလာလို့ရှိရင် စရိုက်လို့ ခေါ်လိမ့်မယ်။ အထုံဆိုတာကတော့ အကျင့်စရိုက်တစ်ခုခုကို မသိစိတ်ကပါစွဲပြီး အလိုအလျောက် လုပ်မိလျက်သား၊ အားထုတ်မှုမလိုပဲ အသားတကျလုပ်မိလျက်သား ဖြစ်လာတာကို ပြောတာပါ။ သတ္တ၀ါတွေမှာ သူတို့ကျင်လည်ရာ ဘ၀ဟောင်းတွေကို လိုက်လို့ စရိုက်တွေ အထုံတွေက ခုဘ၀ နောက်ဘ၀တိုင်အောင် အရိပ်ပမာ လိုက်ပါလာတတ်ပါတယ်။ တချို့က လောဘစရိုက်ရှိမယ်။ တချို့က ဒေါသစရိုက်ရှိမယ်။ တချို့က မောဟစရိုက်ရှိမယ်။ အဲသလိုမျိုးပါ။ အကုသိုလ်နဲ့ အထုံပါလာသူများကျတော့ မုဆိုးအတတ် တံငါအတတ်တို့မှာ တဘက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်လာတာမျိုး၊ လက်နက်၊ အဆိပ်၊ သေရည် အရောင်းအ၀ယ်တွေနဲ့ မီလျံနာဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့။ ပါရမီဆိုတာကတော့ မိမိသွားလိုတဲ့ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကိုရောက်အောင် အစဉ်မပြတ် ကူးခတ်သွားသလိုမျိုး ဦးတည်ရာတစ်ခုခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကျင့်ကောင်း စရိုက်ကောင်းတွေကို ဘ၀ပေါင်းများစွာ ၀ီရိယစိုက်ထုတ်လို့ အထုံပါအောင် ဖြည့်ကျင့်ရင်း တစတစပြည့်စုံလာလေသမျှကို ခေါ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကိုယ်ဥာဏ်မီသလောက် တွေးကြည့်တာလေ။ မဟုတ်ရင်လည်း ဘုန်းဘုန်းတို့က ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။
အဲသည် စရိုက်၊ အထုံ၊ ပါရမီဆိုတာတွေဟာ ကုသိုလ် အကုသိုလ်အမှုများလိုပဲ ကျင်လည်ရာဘ၀တိုင်းကို “၀ါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမီ” ဆိုသလို စိုက်လိုက်မတ်တတ် လိုက်ပါလာတတ်လေတော့ “သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့” တို့၊ “သမဏေန သမဏော”တို့ ပြောလေ့ရှိကြတဲ့အတိုင်း ကိုယ်နဲ့တူရာတူရာ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါကိုသာ အစေးကပ်ကပ် စုဝေးနှီးနှော အဖော်သဟဲပြုကြသလို လေးစားကြည်ညို ဆည်းကပ်ရာတွေမှာလည်း စရိုက်တူ၊ သဘာဝတူ၊ လမ်းစဉ်တူရာကိုသာ အထင်တကြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါလိမ့်မယ်။ သည်သဘောကြောင့်မို့လို့ ပညာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်၊ ဓနရှင်တွေအကြားမှာ တန်ဖိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ (ပညာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ ပညာတတ်တဲ့သူတွေသာ သိနိုင်တာမျိုးလို့တော့ မပြောရဲကြောင်းပါ။) “ခင်ဗျားပညာရှိကြီးလုပ်နေပြီးတော့ ရေဗူးပေါက်တာ ကျုပ်လာမပြောနဲ့ဗျာ။” လို့ ငမိုးရိပ်မိကျောင်းလို ကြိမ်စကြာအရိုက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ “နင့်လိုဘွဲ့နဲ့အကောင်မျိုး ဆယ့်ငါးယောက်လောက် ပိုက်ဆံပေးပြီး ခြေသလုံး နှိပ်ခိုင်းထားလို့ရတယ်။” လို့ပြောလာရင် ဆယ့်ငါးယောက်ပြည့်သွားမှာစိုးလို့ အလုအယက် တုံကင်ယူထားကြမလား။ ပညာရှိဆိုတာ ပညာရှိနေရုံသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း သူ့စရိုက် သူ့အထုံပါရမီနဲ့လာတာမဟုတ်လား။ ကေသရာဇာမှန်ရင် မြက်မစားဘူးဆိုတဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ လျှာပေါ်မှာ မြက်ပေါက်စေဦးတော့ဆိုတဲ့ ပညာမာနလေးတွေလည်း ရှိမယ်။ ပညာရှိတို့မည်သည် ဘာတွေကို လုပ်လေ့မရှိဘူး ဆိုတာတွေနဲ့ ဘာတွေကို လုပ်လေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကို သဘောပေါက်စေချင်တဲ့အတွက် ပညာရှိဂုဏ်ရည်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအာင်နော်။
ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေထဲက ပထမဦးဆုံးပါမောက္ခ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အသက်အားဖြင့်ဆိုရင် ၂၄နှစ်သာ ရှိပါသေးသတဲ့။ လူမျိုးခြားတွေချည့် ကြီးစိုးတဲ့ ကာလကတ္တားတက္ကသိုလ်ရဲ့ လက်အောက်ခံ ရန်ကုန်ကောလိပ်မှာ ဆရာကြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဌာနကတော့ အခု အရှေ့တိုင်းပညာဌာနလို့သိကြတဲ့ ပါဠိဘာသာဌာနမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုပြောရင် ဒဏ်တပ်တဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းများကနေ အောင်လာပြီး “မြန်မာစကားတွေ မေ့ကုန်ပလားကွယ် မေ့ကုန်ပလားကွယ် ပြောစမ်းပါမောင်ရယ်” လို့ မကြည်အောင်သီချင်းထဲမှာပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကောလိပ်ကျောင်းမှာ ပါဠိလိုဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးဟာ ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ “ပဋိသင်္ခါယောနိသော အပျိုမြင်ရင် ငါ့ကိုပြော” လို့ ကျက်ခဲ့မှတ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုရင်ဘ၀ ကျောင်းသားဘ၀မျိုးက လာတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မိဘနှစ်ပါးက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘမျိုးဘိုးတူ မျိုးကောင်းရိုးကောင်းလို့ ပြောနိုင်တာကတော့ ၀န်ထောက်မင်းဦးတင်က မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး ဦးလေးတော်သူက ကိုယ်တွေ ငယ်ငယ်က ခေါင်းအုံးအိပ်လို့ရပြီး အထူဆုံးစာအုပ်လို့ သိကြတဲ့ ဦးထွန်းငြိမ်း အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓါန်ကို ပြုစုသွားသူ ၀န်ထောက်မင်းကြီးဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒါတောင်မှ ပါဠိဘာသာကို မြစ်ဖျားခံရာ အိန္ဒိယတိုင်းသားများအလယ် ကာလကတ္တားတက္ကသိုလ်မှာ တရားမင်းကြီးချုပ်ချီးမြှင့်တဲ့ “ဂျာဒင်းဆု” ကို ရခဲ့သလို ရနောင်းဘုရင်ခံက ချီးမြှင့်တဲ့ “ရနောင်းဆု” ရခဲ့ပါသတဲ့။ အဲသည်ရာထူးနေရာကို သူ့ကိုမှ မခန့်ရင် မိုးကြိုးကြီးပစ်သွားလိမ့်မယ် လို့ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေကြလို့သာ ကိုလိုနီခေတ်ကြီးထဲ မြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါမောက္ခရယ်လို့ မဖြစ်မနေ ခန့်အပ်သွားရပါသတဲ့။ (မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကင်ဂျုံအီတော်သလို တော်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ သိစေချင်ပါတယ်) ဒါက သူဘာလဲဆိုတာကို မသိမမီလိုက်သူတွေ သိရအောင် မိတ်ဆက်ပေးရုံ သက်သက်ပဲ ရှိသေးတာ။
သူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေ သိရင်တော့ တခြားသူတွေမပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးတော်ဘတော် စာရေးဆရာကြီးများကိုယ်တိုင် လူချင်းတွေ့ရင် ထိုင်ကန်တော့လောက်အောင် ကြည်ညိုသွားကြတာ။ မြန်မာစာရေးဆရာထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မွှတ်နေအောင်တတ်ကျွမ်းလို့ အသက်ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကောလားရှစ်တွေ အထပ်ထပ်ရခဲ့ပြီး ရှားလော့ဟုမ်းတွေကို ဦးစံရှားရယ်လို့ ဂန္တ၀င်မြောက်အောင် မြန်မာမှုပြုခဲ့သူ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကတော့ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်း ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ကြည်ညိုလွန်းလို့ ရှိခိုးပါသတဲ့ ။ ။မြန်မာစာပေလာကမှာ ခေတ်စမ်းစာပေရယ် လို့ ခေတ်တစ်ခေတ်ဆန်းလာအောင် ရှင်းလင်း တိ ကျပြောင်မြောက်တဲ့ အရေးအသားများနဲ့ လမ်းသစ်တီထွင်သွားသူ ဆရာကြီး သိပ္ပံမောင်ဝကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားအောင်ဆာင်ရွက်သွားနိုင်သူ မြန်မာပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးသုံးဦးရှိတာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ယစ်မျိုးမင်းကြီးဦးရွှေဇံအောင် နဲ့ ပါမောက္ခ ဦးဖေမောင်တင် ပါတဲ့။ ဗေဒါလမ်းကဗျာရယ်လို့ မြန်မာခေတ်စမ်းကဗျာလောကမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းအောင် ထင်ရှားခဲ့သူ ဆရာကြီးဇော်ဂျီကတော့ သူတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ လောဘနည်း၍ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်သူနှစ်ဦးကတော့ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနဲ့ ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ပါတဲ့။ ပညာတတ်ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ ပညာရှင်ကိုမြင်ရုံနဲ့ ကြည်ညိုခြောက်ခြားရိုးထုံးစံမရှိဘူးဗျ။ ဆရာ့ဆရာကြီးများ ကိုယ်တိုင်က ရှာမှရှားပါပေတယ်လို့ လေးလေးစားစား ရင်မှာထားကြတာဟာ ဘယ့်လောက်ပညာပြည့်သလဲ သိနိုင်လောက်ပါတယ်။
“အဲတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ကားပါမစ်ကျမှာလား။ နေပြည်တော်မှာ မြေကွက်ပေးမှာလား။ ဘာမှလည်းလုပ်မရပဲနဲ့” ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် ပညာဆိုတာ ရောင်းမရ ၀ယ်မရ၊ အမြတ်မရ၊ ဈေးကွက်မ၀င်။ ဘယ်နားသွား သုံးစားရမှာတုန်း။
ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးတင် မကသေးပါဘူး။ မြန်မာစာပေ တိုးတက်တွင်ကျယ်ရေး အတွက်လည်း ဦးဆောင်လမ်းပြသွားခဲ့တာ အထင်အရှားပါပဲ။ သင်ရိုးမြန်မာစာမှာ ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ကြီးကို ပြဌာန်းပေးခဲ့တဲ့အခါ ခရစ်ယာန် သာသနာပြုကျောင်းများက မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ပါရမီတော်ခန်းတွေမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို မသင်နိုင်ပါဘူးလို့ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ ထူးခြားတာက ပြဌာန်းတဲ့သူကိုယ်တိုင်က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး “ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသင်ခွင့်ရတာ ဘာဖြစ်သေးတုန်း။ ကျေးဇူးတောင်တင်ရဦးမှာ မဟုတ်လား။” တဲ့။ အဲဒီစကားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် မပြောင်းပဲပြောနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာသာတရားနဲ့တောင် ရောထွေးမသွားဘူးလို့ သိသာစေပါတယ်။ ကလေးဘ၀ကတည်းကစပြီး အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ပညာအထိ သင်ကြားလာခဲ့ရတဲ့ မြန်မာစာသင်ရိုး စကားပြေ ကဗျာများဟာ ဆရာကြီးရဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခုကျွန်တော်တို့ ရေး ဖတ် ပြော သင်နေတဲ့ မြန်မာစာတွေအားလုံးဟာ ဆရာကြီးပုံသွင်းပေးလိုက်တဲ့ လက်ရာမွန် စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာပေသမိုင်းကို ပြုစုခဲ့ရုံတင်မကဘူး။ မှန်နန်းရာဇ၀င်တော်ကြီးကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတောင် လုပ်သွားသေးတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာလူမျိုးပါလို့ ပြောရင် ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့တော့ ကြားဖူးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ (ခုခေတ် လှယဉ်ကျေးမယ်ကလေးတွေက ဒေါ်ခင်ကြည်နံမယ် မကြားဖူးသလို စာရေးဆရာ တော်တော်များများကလည်း ဆရာကြီးနံမယ်ပြောပြရင် ဘူကြီးတုန်း လို့ ပြန်မေးမယ့်သူ များပါတယ်။)
ဆရာကြီးရဲ့ အံ့ချီးမကုန်နိုင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေထဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ခြင်းဆိုတာလည်း ပါပါတယ်။ မင်းပေါက်စိုးပေါက်ဇာတိကနေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာအထိ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် ပညာရဲရင့် ပွဲလည်တင့်ခဲ့သော်ငြားမြန်မာမူမြန်မာစိတ်ကတော့တစ်ရွေးသားမျှ လျော့မသွားပါဘူး။ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်က ဘီလစ် လို့ခေါ်တဲ့ ကျမ်းပြုပညာပါရဂူဘွဲ့ ရလာခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းမှာ စာသင်ရတဲ့အခါ သူများတွေလို အနောက်တိုင်းဝတ်စုံမ၀တ်ပဲ ရင်ဖုံးတိုက်ပုံ၊ တောင်ရှည်ပုဆိုး၊ မောင့်ကျက်သရေခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ သင်ပါသတဲ့။ သူနေတဲ့ အင်းစိန်ပေါက်တောကနေ ရန်ကုန်ကောလိပ်ကို လာတဲ့အခါ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ တောင်ရှည်ကို ခါးတောင်းကျိုက်ပြီးလာတာတဲ့။ ရွဲ့များရွဲ့နေသလား အောင့်မေ့ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကခန့်လို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပါမောက္ခဖြစ်နေပေမယ့် အရေးကြုံရင် အမြဲတမ်း မြန်မာကျောင်းသားတွေဘက်ကသာ ရပ်တည်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူ့မှမခန့်ရင် မိုးကြိုးပစ်မှာကြောက်လို့ မဖြစ်မနေ ခန့်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဟာ ပါမောက္ခရာထူးမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးကို ကျေနပ်စေဖို့ ဆရာကြီးကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး ရာထူးကိုလည်း မဖြစ်မနေ ခန့်အပ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ကိုနုတို့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းတို့လို လူငယ်ကျောင်းသားများကတဘက်၊ အာဏာလက်ရှိ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကတဘက်အကြားမှာ ပညာရှင်ပီသစွာ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မယိမ်းပဲ သမာသမတ်ကျကျ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေအောင် ထမ်းသွားခဲ့တာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုပါပဲ။ “သည်သူငယ်တွေကို အခါပေးလိုက်ရင်ဖြင့် နောင်အခါ မင်းဆရာဖြစ်ရချေသေးရဲ့” ဆိုတဲ့အစားထဲကမဟုတ်တာ အင်မတန် အံ့သြချီးကျူးစရာပါ။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ချက်မှန်သလို မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ပြန်တာပါပဲ။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့ တို့ဗမာသတင်းစဉ်တွေကို ထောက်ပံ့လေ့ရှိပါသတဲ့။ လှေနံနှစ်ဘက်နင်းတာမျိုး မဟုတ်ပဲ အလုပ်တာဝန်နဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကိုလည်း ရောထွေးမပစ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲက လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသုံးပြီး မဲဆွယ်သူတွေကို မြင်ဖူးရင် ဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းသလဲ သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့တူရာတူရာကိုသာ ကြည်ညိုလေးစား အထင်ကြီးလေ့ ရှိကြတယ်ဆိုတော့ သည်ကနေ့ခေတ်အခါမှာတော့ ဆရာကြီးလို ပညာရှိစစ်စစ်ကြီးတွေကို လူမိုက်မှ လူမိုက် လို့်ပဲ ထောပနာပြုကြပါလိမ့်မယ်။ ပညာကို ငွေကြေးနဲ့ အလဲအလှယ်မပြုတတ်သေးပါဘူး။ ဆရာကြီးရဲ့ပညာကိုလေးစားလို့ ယိုးဒယားဘုရင်က ရွှေဒင်္ဂါးပေါင်တစ်ထောင် ချီးမြှင့်တဲ့အခါ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မသုံးပဲ ပါဠိကျမ်းစာအသင်းကို လှူဒါန်းလိုက်ပါသတဲ့။ ဘီအေအောင်လို့ မြို့အုပ်လုပ်ရအောင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ရာထူးခန့်တာကိုတောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူးငြင်းပြီး အထက်တန်းပြဆရာအလုပ်ကိုပဲ ၀င်ပါသတဲ့။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပါရဂူဖြစ်အောင် ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားလာခဲ့တာဟာ “သည်လိုဘွဲ့မျိုးနဲ့ ဆရာဝန်တွေ နိုင်ငံခြားမှာသွားလုပ်ရင် တစ်နာရီ ဘယ်လောက်ရသလဲ သိရဲ့လား” လို့ ပြောနိုင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာထူးမမက်သော်ငြား သူတပါးအစားထိုးလို့မရတဲ့ ပညာရှင်နေရာကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိလာတဲ့အခါ တိုင်းတပါးသားတို့က မတရားသဖြင့် တင်စီးအနိုင်ယူလာတဲ့အခါမှာလည်း ခေါင်းငုံ့ခံလေ့မရှိပါဘူး။ လန်ဒန်မြို့ မြန်မာကျောင်းသားအသင်းဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက် ဆာဟာဗေးအင်ဒါဆင်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခဲ့တဲ့အခါ ဆာဘွဲ့ရ အင်္ဂလိပ်သူကောင်းမျိုးကြီးက မရှက်မကြောက် မဲလိမ်ပြီး အနိုင်ယူလိုက်ပါသတဲ့။ (ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်။ အဟတ် အဟတ်) သူ့နိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ပြန်၊ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ နန်းတော်က သူကောင်းပြုထားသူတစ်ဦး အကြားမှာ ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်သော်ငြား ဆရာကြီးက အလျှော့မပေးပဲ လန်ဒန်တရားရုံးတော်ထိ တက်ရောက်တိုင်ကြားပြီး အဆုံးအဖြတ်ခံယူကာ အနိုင်ရခဲ့ပါသတဲ့။ (သည်တခါမှာတော့ အံ့သြမိတာ ဆရာကြီးတင်မကတော့ဘူး။ လန်ဒန်တရားရုံးတော်လည်း ပါသွားပြီ။ နှစ်ဘက်စလုံး ရူးများနေကြသလား မသိနော်။ ဟိ ဟိ)
နောင်လာနောက်သား မြန်မာများအတွက် ပညာမျိုးစေ့တွေချခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုလည်း ဆရာကြီးက မလစ်ဟင်းခဲ့ပြန်ဘူးဗျား။ ဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်၊ ဆရာဇော်ဂျီတို့ဟာ သူ့တပည့်တွေပါတဲ့။ “မီးသွေးခဲမို့ မဲသကို မြန်မာသွေးမို့ ရဲသကို” လို့ ဆိုရမလောက် ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာ ပညာအမွေတင်မကပါဘူး။ ဆရာကြီးဆီက ပညာရှင်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကိုလည်း ဆက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်မောင်လူအေးဟာ အင်္ဂလိပ်လက်ပါးစေသက်သက်မဟုတ်ပဲ ခေတ်စမ်းစာပေအရေးအသားနဲ့ မြန်မာတွေကို နားမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့ရင်း တာဝန်ကျေပွန်သူဝန်ထမ်းတစ်ဦးပီပီ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ခေတ်ပျက်ချိန်မှာ ဓါးပြသတ်လို့ဆုံးရှာပါတယ်။ (အငြိုးနဲ့သတ်တယ်လို့ ပြောကြတာကိုး။ စာမတတ်တဲ့သူတွေက ပညာရှိမှန်းလည်း ဘယ်သိမလဲ။ အလိုလိုကို မုန်းနေဦးမလားမသိ)
တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဦးသာလှအပါအ၀င် မြန်မာဘာသာ၊ မြန်မာစာပေပါမောက္ခတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်တို့ ဆရာကြီးဦးအေးမောင်တို့ အားလုံး အလုပ်ထွက်စာတင်သွားကြတာဟာ သူတို့က ကွန်မြူနစ်တွေမို့လို့၊ ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို မယုံကြည်လို့ဆိုတာမျိုး နိုင်ငံရေးသဘောမပါပဲ ပညာရှင်ဆိုတာ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကို အတင်းအကြပ်စေခိုင်းလာလို့ရှိရင် ရာထူးစည်းစိမ်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ၀န်မလေးဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်အောင် တွေးတတ်ပါ့မလား မသိပါဘူး။ ဆရာကြီးကတော့ ဆရာကြီးပါပဲခင်ဗျ။ ပြည်ထဲအရေး ပေါက်နဲ့ကျေးမှာ ပဲ့ပြားရွှေကြူ လေယူရာမယိမ်းပဲ ကိုယ့်ပညာနဲ့ကိုယ် ပညာရေး အမျိုးသားရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ဖဆပလခေတ်၊ မဆလခေတ် ဘယ်ခေတ်မှာမဆို သူ့ကိုမှမဆည်းကပ်ရင် မိုးကြိုးပစ်တော့မလောက် အစိုးရတိုင်းက တလေးတစားမေတ္တာရပ်ခံပြီး တာဝန်တွေပေးယူရတဲ့အထိ ပညာအရာမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ စာပေစာတမ်း၊ ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်၊ သမိုင်းအထောက်အထား သုတေသနလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်း ညွှန်းလို့ဖွဲ့လို့မကုန်အောင် ပြုစုသင်ကြားပို့ချပေးသွားပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ သမားစဉ် သမားဆက် ဆရာကာပြန် အာခေါင်လှံစူးပုံပြင်နဲ့ ဆရာစားတစ်ကွက်ချန်တဲ့ဓလေ့ဟာ ဆရာကြီးလက်ထက်မှာ စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ အမြစ်ပြတ်သွားပါတယ်။ “တပည့်ဆိုတာ ဆရာထက် တော်ရမယ်။ တပည့်က ဆရာ့ထက်ညံ့နေရင် လောကကြီးက တဆင့်ပြီးတဆင့် ကျဆင်းသွားမှာပေါ့။ တပည့်က ဆရာ့ထက် မတော်ရင် ဆရာညံ့လို့ပဲ။” တဲ့။ ပညာရေးလောကဆိုတာ ဆရာတွေ တပည့်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ “ပညာသမာ အာဘာနတ္ထိ ပညာနှင့်တူသောအလင်းရောင်သည်မရှိ” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ပညာ့ရပ်ဝန်းထဲမှာ ဆရာကြီးရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ဆရာမွေးတပည့်မွေး မွေးကြတဲ့ ခေတ်ဆရာ ခေတ်တပည့်တွေ သဘောပေါက်နိုင်ပါ့မလား။ ဆရာကြီးရဲ့တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါ့မလား။ သည်တခါ ဆရာစိုးရေးတဲ့စာက ရယ်လည်းမရယ်ရဘူး။ ဘယ်သူမှမကြားဖူးတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို အမွှန်းတင်ပြီးရေးထားတယ်။ ပျင်းစရာကြီး လို့ အောင့်မေ့ကြမယ်ထင်တယ်နော်။ ပညာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်၊ ဓနရှင်တွေအကြားမှာ ပြည်တန်ပတ္တမြားကို ရက်တက်ရည်နဲ့ လဲစားကြမယ့်သူတွေလား။ တဆိတ်လောက် ဆက်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဘ၀ဘ၀က အထုံပါလာတဲ့ စရိုက်စိတ်ထားကိုမှီလို့ သည်ဘ၀မှာ ဓနရှင်ဖြစ်ချင်တာလား။ အာဏာရှင်ဖြစ်ချင်တာလား။ ပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာလားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာသိအောင် အရင်လုပ်ကြပါဦး။ သီလရှင်ပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သဘောကွယ်။ အဘိတ်နေ့ကျ အိမ်ကြွခဲ့။ စာမရသေးရင် အောက်ကဟာ ကျက်ထား။
“ဘေးဘယာခပင်း ဝေးကွာရှင်း လွတ်ကင်းကြပါစေ။
ကိုးဆယ့်ခြောက်သွယ် အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ပါစေ။
စိန်ရွှေပတ္တမြား ဒီရေအလား တိုးပွားကြပါစေ။
မိမိကောင်းမှု အကြောင်းပြု တောင်းဆုပြည့်ပါစေ။” တဲ့။
(မှတ်ချက်။ ဆွမ်းဆန်မရမချင်း တစ်လုံးချင်း အသံရှည်ရှည်ဆွဲ၍ဆိုကာ ဆွမ်းဆန်ရသည်နှင့် နောက်ကကျားလိုက်သလို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ပြီးအောင်ဆက်ဆိုပါ။)
Posted by Myint Ko at 5:15 PM No comments:
Labels: ကြိုက်သော ဆောင်းပါး
‘မဟာရန်ကုန်’ တဲ့လေ ...
ရန်အပေါင်း ကုန်စင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်
အလောင်းဘုရား ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တဲ့ မြို့။
အဲ့ဒီမြို့ကြီးပေါ့ ... ‘မီဂါစီးတီး’ တဲ့
ရွံစရာ အနာကြီးနဲ့ ကိုယ့်အမြီးကိုယ်ပြန်မြို
တစက်လေးမှ မသာယာနိုင်တဲ့ မြို့။
ညနေညိုချိန် ‘အေ့’ ခနဲ ယင်းထ
လှောင်ချိုင့်ထဲက ရုန်းမပြနိုင်သေးတဲ့ မြို့။
ခေါင်းမော့ရင်ကော့ လက်ပမ်းပေါက်ခတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြို့။
ဝင်းမော်ဦး၊ ...၊ ...၊ ...
“မိုးပေါ်ထောင်မဖောက်ဘူး” လို့ အပြောခံလိုက်ရတဲ့ မြို့။
၆၂ - ၇၄ - ၇၆ - ၈၈ - ၉၆ - ၂၀၀၇
ဖွတ်သထက် ညစ်ပတ်လာတဲ့ မြို့။
ကျန်တဲ့ သတ္တဝါ (၆) သန်းကျော်က
ကိုယ့်အထုပ် ကိုယ်ပြန်ဖြည်ပြနေတဲ့ မြို့။
သေနတ်ဖောက်သံကို ပန်းနဲ့ ပေါက်သလောက် သဘောထား
“ဟန် .. ကိုယ့်ဖို့ပါကွာ ... ” တဲ့
ရင်ဘတ်ပိန်ပိန်လေး ကောကော့ပြတတ်သေးတဲ့ မြို့။
ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ဝမ်းခေါင်ခေါင်လို့ ဆိုရမလား
တချို့က မင်္ဂလာ (၆) ကြိမ် ဆောင်နေချိန်
တချို့က နို့ညှာကလေး သေလို့တောင်မှ
ထူးခတ်တာ ခံလိုက်ရတဲ့ မြို့။
နှပ်ပစ်၊ သလိပ်ဟပ်သမျှ ခံနေရတဲ့
အရပ်ပျက်မ သာသာ တတိယကမ္ဘာက မြို့။
နွေရာသီဈေးကွက်၊ မြက်တုခင်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်း
သုဝဏ္ဏကွင်းထဲ --ီး၊ လချီး အတိုင်းခံရတဲ့ မြို့။
ငွေစကား၊ ကြေးစကား ပြောရင်း
“အနုပညာသမားပါ ...” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်ကပ်ဂုဏ်ဖော်
ပိုးထိုးလောက်ကိုက်၊ အခွံချည်းကျန်ခဲ့တဲ့ မြို့။
မီးပျက်၊ ဖုန်ထူ၊ ရေမရှိ
‘ရေမီးရှား’ လို့ အခေါ်ခံရတော့
ကိုရီးယားဘာသာစာတန်းထိုး အိပ်မက်အသိုးတွေနဲ့ မြို့။
ဘူတာရုံမှာ သင်္ဘောကြီးတွေ ကပ်တယ်
လေယာဉ်ပျံကို ခဲနဲ့ ပေါက်ရင် ထိမယ်
တလုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ...
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အိပ်မက်မက်တတ်တဲ့ မြို့။
တခါသုံးဆပ်ပြာနဲ့ တဆက်ရှင်စာ ဟိုတယ်ခန်းမှာ
စာရိတ္တတွေ ကျကျပျောက်နေကြတဲ့ မြို့။
‘စကော့ဈေး၊ လေဟာပြင်၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ တရုတ်တန်း’
ခုချိန်ထိ အကြွေ (၁၀၀) ပြန်မအမ်းနိုင်သေးတဲ့ မြို့။
ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ငိုက်တတ်သေးတဲ့ မြို့။
“ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိပါ အမေရယ်” တဲ့
တောက အမေတွေဆီ စာလှမ်းလှမ်းရေးတတ်တဲ့
လက်ပွေ့သည်လေးများ ပျော်စံရာ မြို့။
‘မီဂါစီးတီး’ ဆိုတာ အဲ့ဒီမြို့ကြီးပါပဲ။
ကျနော် အထင်ကြီးတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်။
ရဲရဲတောက် လူငယ်တွေ ရှိတယ်။
ပါဝါ ၅၄ လည်း ရှိတယ်။
ကျနော့် မွေးမေမေ ရှိတယ်။
အမေ တစ်၊ ညီ တစ်၊ ညီမလေး တစ်
ကျနော် ချစ်ရတဲ့ အိမ်ကလေးရှိတယ်။
‘ရန်ကုန်’ ကိုတော့ စစ်မရှုံးစေချင်ဘူး
အဲ့ဒီ မီဂါစီးတီး ‘မဟာရန်ကုန်’ ဆိုတာကြီးကို
ကျနော် ချစ်တယ်။ ။
(ဆတ်သွား-ပုသိမ်-ရေနံချောင်း ... ရင်ဘတ်ချင်း ဂျပ်ပင်ထိုးပြီး ရေးတယ်)
Posted by Myint Ko at 9:57 AM No comments:
Labels: ကြိုက်သော ကဗျာ
အမေ အမြတ်တနိုး ပေးထားတဲ့ နာမည်ပါ။
မျက်စောင်း<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if...